ကမ္ဘာအနှံ့ရောဂါပျံ့နှံ့ကပ်ကြီး အလယ်တွင် ပင်လယ်ပြင်၌ စွန့်ပစ်ခံထားရမှု | ITF Seafarers
ကမ္ဘာအနှံ့ရောဂါပျံ့နှံ့ကပ်ကြီး အလယ်တွင် ပင်လယ်ပြင်၌ စွန့်ပစ်ခံထားရမှု
ဂျီဘိုးတီး ဆိပ်ကမ်းတွင် ကျောက်ချထားသော ထုထည်ကြီးတင် သင်္ဘောကြီး နှစ်စင်းပေါ်၌ ဂရိ သင်္ဘောသား သုံးဦးနှင့် ၎င်းတို့၏ သင်္ဘောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၂၂ ဦးတို့သည် Covid-19 ကမ္ဘာအနှံ့ရောဂါကပ်ကြီး မြင့်တက်နေစဥ်၌ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း သင်္ဘောသား စွန့်ပစ်ခံရမှုများအနက် ပါဝင်စွန့်ပစ်ခံရသူများဖြစ်ကြသည်။
လိုင်ဘေးရီးယန်း အလံတင် သင်္ဘော MV Ptolemeos နှင့် MV Arrybas တို့ပေါ်၌ ချောင်ပိတ်မိခံနေရသည့် သင်္ဘော၏ အင်ဂျင်နီယာများသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ်သမားများ အဖွဲ့ချုပ် (International Transport Workers’ Federation)၊ ဂရိနိုင်ငံ အစိုးရနှင့် အာမခံကုမ္ပဏီများထံမှ အကူအညီပံ့ပိုးမှုကို ရရှိကြပါသည်။
“ကျွန်ုပ်တို့ သင်္ဘောပေါ်တွင် ရှစ်လ ရှိပြီဖြစ်သည်“ဟု M/V Arrybas သင်္ဘော အင်ဂျင်နီယာချုပ် Dimitrios Siakas က WhatsApp မှတစ်ဆင့် ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြောခဲ့သည်။ “ကျွန်ုပ်တို့ ရှစ်လ လစာမရဘဲ ကျောက်ချပြီး နေရပါတယ်၊ ဆိပ်ကမ်း အပြင်ဘက်ကို သွားလို့မရပါ၊ ငွေလည်း မရှိပါ။“
Mr Siakas က သင်္ဘောပေါ်တွင် သင်္ဘောဝန်ထမ်း ၁၁ ဦး ရှိနေသေးသည်၊ အများစုမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဖြစ်ကြသည်။ ညီမတော် သင်္ဘောပေါ်ရှိ သင်္ဘောသား အများစုမှာ သိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ဖြစ်ကြသည်။
သင်္ဘော M/V Ptolemeos ပေါ်ရှိ ဒုတိယ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သူ Dimitrios Falkos ဆိုသူက သူ့မိတ်ဆွေထံ Facebook မှတစ်ဆင့် စာရေးသားခဲ့သည်မှာ- “ဟေး လူ၊ နှစ်လခွဲ ရှိနေပြီး၊ သူတို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပစ်ထားတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ထွက်သွားဖို့ ကြိုးစားတယ်“ သူက ပြောခဲ့သည်။ “ဖုန်း မရတာ အတော်ကြာနေပြီ။ Saint Nicholas က သင်တို့အားလုံးကို ကယ်တင်ပါစေ။“
၎င်းမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က ဖြစ်သည်။ Falkos သည် ၎င်းနေ့မှစ၍ စာရေး မတင်တော့ပါ။
“Mr. Falkos သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ခွဲစိတ်ကုသခံခဲ့ရလိမ့်မည်” ITF အာရတ်ကမ္ဘာ နှင့် အီရန် အဆက်အသွယ်ကွန်ခြာ ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိဖြစ်သူ Mohamed Arrachedi က ပြောကြားခဲ့သည်။ “သူသည် ကုန်းပေါ်၌ လိုအပ်သည့် ဆေးကုသမှုကို မရကောင်း မရနိုင်ပါ။”
Arrachedi က ပြောကြားခဲ့သည်မှာ သင်္ဘောသည် အကြွေးတင်နေသောကြောင့် အဖမ်းခံနေရကြောင်း သူ နားလည်ထားသည်။
“ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲ တရားရုံး လုပ်ငန်းစဥ် နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နိုင်ငံ့ဥပဒေများကို လေးစားပါတယ်၊” သူက ပြောခဲ့သည်။ “သို့သော်လည်း ဒီ သင်္ဘောသားတွေ အိမ်ပြန်ဖို့ လိုပါတယ်။” ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဂျီဘိုးတီးနိုင်ငံ အာဏာပိုင်များက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်လိုပါသည်။ ဂျီဘိုးတီးနိုင်ငံသည် ပင်လယ်ရေကြောင်း အလုပ်သမား စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးထားသည့် စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
“ဒီ သင်္ဘောသားတွေကို ဦးစားလည်း ပေးသင့်ပါတယ်၊ သူတို့ လပေါင်းများစွာ စောင့်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ အဖြေရှာဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ ဂျီဘိုးတီးနိုင်ငံ ပင်လယ်ရေကြောင်း အာဏာပိုင်များသည် MLC အပေါ်ထားရှိသည့် သူတို့၏ တာဝန်ကို လိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီး Ptolemeos နှင့် Arrybas သင်္ဘောပေါ် သင်္ဘောသားတွေ ချောင်ပိတ်မိခံရနေရတာကို အဆုံးသတ်ရပါမယ်။ “
Abandonment provisions ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ကတည်းကစ၍ ပင်လယ်ရေကြောင်း အလုပ်သမား စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။
"ကျွန်ုပ်တို့ သင်္ဘောသားများ အိမ်ပြန်ပို့ရေးကို တောင်းဆိုပါတယ်။“ဟု Arrachedi က ပြောကြားခဲ့သည်။ "နှစ်ယောက်ကို ဆေးရုံတင်ထားတယ်။ အခြားသူတွေမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ရှိတယ်။"
ဂျီဘိုးတီး အာဏာပိုင်များသည် အေသင်မြို့ အခြေစိုက်သည့် Probulk Shipping and Trading ကုမ္ပဏီကို ဘဏ်နှင့်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအပေါ် အကြွေး US$10M တင်ရှိနေခြင်းကြောင့် တရားစွဲနေသည်ဟု IHS Markit Safety at Sea. အရ သိရသည်။
သင်္ဘော နှစ်စင်းလုံးမှာ ကမ်းလွန်တစ်နေရာ၌ ကျောက်ချ၍ စောင့်ထားခိုင်းခံရသည်။
ILO အချက်အလက်ဘဏ် သတင်းပို့သည်မှာ ဖိလစ်ပိုင် သင်္ဘောသား အများစုကို ခရစ်စမတ် မတိုင်မီ အိမ်ပြန်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဂရိ သင်္ဘောသား နှစ်ဦးအား ဒီဇင်ဘာလ နှင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် အိမ်ပြန်ပို့ခဲ့သည်။
သင်္ဘော နှစ်စင်းလုံးကို စင်ကာပူနိုင်ငံ အခြေစိုက် Bronco Shipbrokers ဖြင့် for sale တွင် စာရင်းဖော်ပြထားပြီး လက်ရှိ၌ ဂျီဘိုးတီးနိုင်ငံ၌ ကျောက်ချထားသည့် အခြေအနေဟု စာရင်းဖော်ပြထားသည်။ အတန်းအစားမဲ့၊ အလံတင် နိုင်ငံမဲ့ နှင့် အဖမ်းဆီးခံနေဆဲ။ ကုန်ပစ္စည်း အခြေအနေအဆင့်- ဟာလာဟင်းလင်း။"
သို့သော်လည်း သတင်းများအရ Probulk (ယခင် Entrust Maritime) က ယမန်နှစ် စက်တင်ဘာလ၌ လိုင်ဘေးရီးယန်အလံတင် သင်္ဘော MV Ptolemeos ကို သံထည်အရည်ကြိုရန်အတွက် ရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း one industry publication အရ သိရပါသည်။
Dun & BradStreet က Probulk ကို USD$2 ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတင်းပို့သည်။ Tradewinds အရ ကုမ္ပဏီတွင် ယခင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်လောက်တွင် လူမွဲခံခဲ့သည့် ရာဇင်ဝင်ရှိခဲ့သည်။
စင်ကာပူတက္ကသိုလ် စာတန်းတစ်ခုကလည်း reported that authorities in India attempted ယမန်နှစ်က အကြွေးမဆပ်သည့်အတွက် MV Arrybas ကို သိမ်းဆည်းရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း တရားရုံးတွင် မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။
MV Ptolemeos သင်္ဘောကို ITF အနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် သင်္ဘောသားများက သူတို့၏ သုံးလစာ လုပ်ခငွေများကို သင်္ဘောမှာ ကင်ညာနိုင်ငံ၌ ဆိုက်ကပ်ထားစဥ် မရရှိခဲ့ကြောင်း တိုင်တန်းသည့်အခါ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အာရုံစိုက်ခဲ့ရပါသည်။
ကင်ညာ ဆိပ်ကမ်း ထိန်းချုပ်ရေးက သင်္ဘောအား MLC ဖောက်ဖျက်မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင် သင်္ဘောသားများမှာ အကယ်၍ သူတို့ တိုင်တန်းလျှင် နာမည်ပျက်စာရင်း အသွင်းခံရမည်ကို ကြောက်ရွံ့ခဲ့သည်ဟု သင်္ဘောပေါ်သို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် ITF စိစစ်ရေးမှူးတစ်ဦးက သတင်းပို့ခဲ့သည်။ သူတို့အား လုပ်ခများ လက်ခံရရှိကြောင်း အတုလုပ်ထားသည့် လုပ်ခပေးစာရွက်များကို အတင်းအားဓမ္မ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့သည်။ ITF သည် သင်္ဘောသားများ ရရန်ရှိသည့် လုပ်ခများကို သင်္ဘောအား ထွက်ခွာခွင့် မပြုမီ ရရှိအောင်လုပ်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဂျီဘိုးတီနိုင်ငံရောက်ရှိချိန်၌ သင်္ဘော နှစ်စင်းလုံးမှာ အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
ITF သည် ဂရိ သင်္ဘောသားများကိုယ်စား လူသားချင်းစာနာသော အကြောင်းရင်းများကြောင့် အကူအညီတောင်းခံမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
ဂျီဘိုးတီး ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်ထံ သူ၏ အီးမေးလ် ပေးပို့စာတွင် Arrachedi သည် အရေးပေါ် အကူအညီအတွက် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
“ကျွန်ုပ်တို့ သင်္ဘောအပေါ် တရားစွဲနေတာကို သိရှိပါတယ်၊ အဲဒါကို ကျွန်ုပ်တို့ လေးစားပါတယ်။” ဟု သူ စာရေးခဲ့သည်။ “သို့သော်လည်း ဒီကိစ္စမှာ သင်္ဘောသားတွေဟာ စွန့်ပစ်ခံနေရပြီးဖြစ်နေတဲ့အပြင် သူတို့ လုပ်တာမဟုတ်တဲ့ ဒီအခြေအနေအတွက် ပေးဆပ်ရမဲ့သူတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ စဥ်းစားရပါမယ်။”
ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင် မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါ။
ဂျီဘိုးတီး ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် Mohamed Abar ထံ တိုက်ရိုက်ပေးပို့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ရက်စွဲတပ်ထားသော ဒုတိယ အီးမေးလ် တစ်စောင်တွင် Arrachedi က ရေးသားခဲ့သည်မှာ- “ITF ဟာ ယခု လပေါင်းများစွာ စွန့်ပစ်ထားတဲ့ အခြေအနေကို အလွန် စိတ်ပူပန်နေပါတယ်။“
သူက ပြောကြားခဲ့သည်မှာ အိမ်ပြန်ပို့ပေးရေးနှင့် မိမိတို့၏ အလုပ်အတွက် လုပ်ခရရှိရေးဆိုင်ရာ သင်္ဘောသားများ အခွင့်အရေးများအား ဖောက်ဖျက်မှုကို ITF သည် ကြည့်ရှုနေပါသည်။
“သင် သိရှိထားတဲ့အတိုင်း အင်ဂျင်နီယာချုပ်ကို ဆေးရုံတင်ထားပါတယ်၊ သူဟာ ကျန်းမာရေး မပြည့်စုံဘူးလို့ ပြောခံထားရပါတယ်။ အခြားသူတွေကတော့ အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာ စိတ်ကျမှု ခံစားနေရပါတယ်၊ သူတို့ဟာ အိမ်ပြန်ပို့ပေးဖို့ လိုလားကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။“ ဟု Arrachedi က ဆိပ်ကမ်း အကြီးအကဲကို စာရေးသားခဲ့ပါသည်။
သူက ပြောကြားခဲ့သည်မှာ သင်္ဘာများအား တက်ရောက်ပေးမည့် အစားထိုး သင်္ဘောသားများမှာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်း ဂရိနိုင်ငံ အစိုးရက ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သည်။
“ငြင်းဆိုဖို့အတွက် ပြဿနာ မရှိသင့်ပါဘူး သို့မဟုတ် အကြောင်းရင်း မရှိပါဘူး၊” ဟု သူက ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဆိပ်ကမ်း အကြီးအကဲအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါ၊ သူတို့...... အိမ်ပြန်ပို့ပေးပါ။”
Arrachedi က ပြောကြားခဲ့သည်မှာ အားထားမှု သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု မရှိမှုအပေါ် အလွန် စိုးရိမ်နေပါသည်။
“သင်္ဘောတွေကို ဆိပ်ကမ်းအတွင်း ဝင်ခွင့် မပြုခဲ့ပါဘူး၊ သင်္ဘောသားတွေ ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး ဂရိ သင်္ဘောသားတွေ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုနေတာတွေကို လျစ်လျူရှုခံခဲ့ရတယ်။”
သင်္ဘောသားများအနေဖြင့် ပုံမှန် ဘဝကို ပိုရရှိစေရန် သင်္ဘောအား ကမ်းနှင့်နီးနီးနားနား ဆိုက်ခွင့်ပြုရန်အတွက် Arrachedi က တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တရားစွဲဆိုမှု လုပ်ငန်းစဥ် ဆုံးခန်းတိုင်သည့်အထိ သင်္ဘောသားများအား သင်္ဘောပေါ် အတင်း မနေခိုင်းသင့်ပါ၊ တရားစွဲသည့်ကိစ္စမှာ လများ သို့မဟုတ် နှစ်များ ကြာနိုင်သည် ဟု သူက ထပ်ဆင့်ပြောခဲ့သည်။
ITF စာများ ပေးပို့ပြီးနောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် (International Labour Organisation (ILO)) မှ correspondence စာများကို ပေးပို့ခဲ့သည်၊ Ptolemeos သင်္ဘော အင်ဂျင်နီယာချုပ်ကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အိမ်ပြန်ပို့ခဲ့ပါသည်။
“အသည်းအသန် အားထုတ်မှုကြောင့် သင်္ဘောသား အားလုံးအား အိမ်ပြန်ပို့ခဲ့ပြီး သူတို့၏ နောက်ဆုံး လေးလစာ လုပ်ခများကို ရရှိစေခဲ့သော်လည်း ၎င်းသည် ဒေသခံ စီမံရေး အာဏာပိုင်များထံမှ အတိုက်အခံလုပ်မှုကို ကံမကောင်းစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်၊” ဟု West P&I Club မှ ကိုယ်စားလှယ်များက SAS ထုတ်ပြန်စာ တစ်စောင်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂရိနိုင်ငံ အစိုးရသည် ဂျီဘိုးတီး အာဏာပိုင်များနှင့် သဘောတူညီချက် တစ်ရပ်ကို ရရှိရန် ကြိုးစားနေလျက်ရှိသော်လည်း ကျွန်တော့်အနေဖြင့် မည်သည့်အဖြေမျှ လုံးဝ မရသေးပါ၊“ ဟု ဂရိနိုင်ငံ သင်္ဘောလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဖြစ်သူ Yiannis Plakiotakis က ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပါလီမန်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဤကိစ္စအားလုံးမှာ Covid-19 မတိုင်မီကတည်းက စတင်ခဲ့ပါတယ်“ ဟု Arrachedi က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ယခု ကျွန်ုပ်တို့တွင် အိမ်ပြန်ပို့ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပို၍ပင် အခက်အခဲများ ရှိနေပါတယ်။ သင်္ဘောသားတွေဟာ မျှော်လင့်ချက် ကုန်ခန်းနေပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက် အရိပ်အယောင် လုံးဝ မရှိပါ။”
Arrachedi က ပြောကြားခဲ့သည်မှာ နိုင်ငံများအနေဖြင့် ကမ္ဘာအနံ့ ရောဂါကပ်ကြီးအတောအတွင်း မိမိတို့၏ နယ်စပ်များကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည့်အလျောက် သင်္ဘောသား စွန့်ပစ်မှု ကိစ္စများ များပြားနေခဲ့လျက်ရှိပါသည်။
“ကျွန်ုပ်တို့မှာ ဤကိစ္စ အများအပြား ရှိပါတယ်၊“ သူက ပြောကြားခဲ့သည်၊ လုပ်ခ မရရှိဘဲ ငါးလ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၌ တိရစ္ဆာန်တင်သင်္ဘော Hannoud-O ပေါ် စွန့်ပစ်ခံထားရသည့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံသား သင်္ဘောသား ၁၈ ဦး၊ အစားအစာနှင့် သောက်ရေ မရှိဘဲ ဆူဒန်နိုင်ငံ၌ Nader သင်္ဘောပေါ် အီဂျစ် သင်္ဘောသား ခုနှစ်ဦး နှင့် Tunisia နိုင်ငံ၌ မိမိ သင်္ဘောသို့ မသွားနိုင်သည့် သို့မဟုတ် အိမ်ပြန်၍မရနိုင်သည့် ချောင်ပိတ်မိခံရသည့် အိန္ဒိယ သင်္ဘောသား တစ်ဦးတို့ကို စာရင်းပြုထားရင်း ပြောခဲ့ပါသည်။
“အများအပြားမှာ သူတို့ရဲ့ သင်္ဘောသား လုပ်ခများကို မပေးကြပါ။” ဟု သူက ပြောကြားခဲ့သည်။ “သူတို့သည် တာဝန်ခံမှု မရှိဘဲ လုပ်နေကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ကင်ဆာရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေကြောင်း လုပ်ငန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ ဒါကို အမြစ်ကဖြတ်ပစ်ဖို့ အတူလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။”
ITF သည် ဂျီဘိုးတီး ဆိပ်ကမ်း နှင့် ဂရိနိုင်ငံ အစိုးရအား ဝေဖန်ချက်အတွက် ဆက်သွယ်ခဲ့ပါသည်။
ဆိပ်ကမ်းနှင့်ခရီးသွား ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ချက်မျာ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ဆိပ်ကမ်းများရှိ လုံခြုံရေး အရေးယူ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်တကွ အကယ်၍ သင့်တွင် အရေးပေါ် ပြဿနာတစ်ခုခုရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိစစ်ရေးမှူးများကို ဆက်သွယ်ရန် အသေးစိတ်များအပါအဝင် နိုင်ငံ့သတင်းအချက်အလက်များ ပါရှိသည့် မြေပုံကိုကြည့်ရန် ဝက်ဘ်ဆိုက်- Click here
အကယ်၍ သင်သည် ITF စိစစ်ရေးမှူးတစ်ဦးကို ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ပေးသော သင်္ဘောသား ပံ့ပိုးမှု အဖွဲ့ကို အီးမေးလ် seafsupport@itf.org.ukဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။